Pool ọdọ mmiri 80,000 + nkwalite ndị ọzọ - cheapinternetsecuritysoftware.com
Pool ọdọ mmiri 80,000 + nkwalite ndị ọzọ
Kasị mma casinos dị n’ịntanetị nwere ike ịnye mkpọsa cha cha dị iche iche mgbe niile ma ọ bụ n’oge pụrụ iche. Ka o sina dị, ọ ka dị mkpa ịmata ndị nke ndị ikike ịgba chaa chaa nyere ikike na-achịkwa. Yabụ, ebe a bụ mkpọmkpọ cha cha ọhụrụ n’izu a.
Anyị hụrụ ebe ọrụ na Skol Casino n’izu a. Dị nnọọ ka ihe aha ya na-ekwu, Wednesde na Skol bụ n’ezie wacky!
Ya mere, chọpụta ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe obi ụtọ banyere onyinye a nke jupụtara na ihe ijuanya!
Iji nweta uru nke Skol Casino’s Wacky Wednesday, naanị ị ga – eme usoro iji mezue ego achọrọ. Debe opekata mpe £ 20 ma ọ bụ karịa na cha cha ga-agbakwunye 20% egwuregwu egwuregwu nwere ike ịbawanye ruo £ 25. Ọzọkwa, Skol Casino ga-akwụghachi gị ụgwọ 20 Bonus Spins nke enwere ike iji ya na oghere abụọ.
Onyinye a dị irè n’etiti 00:01 CET na 23:59 CET ụbọchị Wenezdee ọ bụla nwere nkwụnye ego kacha nta nke £ 20. Obere ego ị ga – enweta site na ego gị ruru £ 10. Ozugbo ị ga-enweta ihe achọrọ chọrọ nke 35x uru nke ego ego gị, ị nwere ike iwepu oge ọ bụla. Ọ bara uru maka ndị egwuregwu UK naanị, enwere ike iji Bonus Spins site na mkpọsa a na oghere ruru naanị n’elu.
A na-akwụkwa mmeri niile site na Spins Bonus dị ka ego ego ma tinye ya na £ 100. Ozugbo etinyere ego ego a, ha ga-eji ha n’ime ụbọchị iri atọ tupu ha gwụ ma wepụ ya. N’ihe banyere nzọ gị, oke kachasị ị nwere ike ịme maka ego gị ọ bụla ruru £ 5 naanị.
Enwekwu: Egwuregwu nke izu
Ọnwa Ise 3, 2021 – Mee 5, 2021
Maka ezumike ụlọ akụ a, oghere Ekwensu kwalitere onyinye Egwuregwu nke Izu!
N’adịghị ka usoro na ọnọdụ ahụ, ị ​​nwere ike ime ọtụtụ ihe cha cha enyere Bonus Spins n’ụzọ ndị ọzọ. Nke ahụ ziri ezi, ị nwere ike iji spins gị ọ bụghị naanị “juan”, mana oghere 2 ahọrọ oghere cha cha. Ihe kacha atọ ụtọ bụ na ị ga – enweta 20 karịa 10 Bonus Spins!
Mgbakwunye ndị ị ga – enweta n’izu a dị irè na Willy’s Hot Chilli na Spinata Grande. Ọ bụrụ na-amasị gị otu oghere na nke ọzọ, ị nwere ike họrọ kpam kpam na-enwe gị daashi spins. Chọpụta ihe, ị nwekwara ike nweta onyinye a ugboro abụọ n’etiti Machị 3, 2021 (00:00 BST / GMT) na Machị 5, 2021 (23:59 BST / GMT).
Iji ruo eruo maka mkpọsa cha cha a, ndị egwuregwu kwesịrị izute nkwụcha ego kachasị mkpa nke casino 10. Ohere mepere Ekwensu cha cha ga-agbakwunye 20 Bonus Spins na akaụntụ gị ozugbo ị ruru eru maka nkwalite ahụ. Ndị egwuregwu niile tozuru etozu nwere ike ị nweta mgbakwunye abụọ ugboro abụọ ka nkwalite ahụ dị mma.
Ihe kachasị 20 Bonus Spins nke dị na Willy’s Hot Chilli ma ọ bụ Spinata Grande nwere uru egwuregwu dị £ 0.20 kwa ntụgharị. Iji rụọ ọrụ mgbakwunye ndị a, ị ga-ahọrọ otu n’etiti oghere ndị a ma jiri ihe niile Bonus gị na ya. O nwere ike iburu ụbọchị azụmahịa atọ tupu ntụgharị ahụ erute na akaụntụ ndị egwuregwu tozuru etozu.
Ọzọkwa, a na-enye mmeri niile sitere na nkwụghachi ụgwọ ụgwọ na ego ego na 40x wagering chọrọ. Nke a metụtara ego zuru ezu ị rụpụtara ma tinye aka na ọnụego ntụgharị nke bụ 4x ego gị akwụ. Ozugbo a choro ihe a choro, a gha agbanwe ego ego a.
N’ikpeazụ, ego ego a na-enweta site na Bonus Spins dị irè n’ime ụbọchị 28 naanị. Yabụ, a ga-ewepụ ego niile a ga – akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na emezughi ihe ndị a chọrọ n’ime oge a
Maka ndị egwuregwu ọhụụ: nkwụnye ego 1: 100% kwụnye ego ruo £ 10 + 10 na-agbakwunye ụma na Starburst Terms na ọnọdụ dị. 18+
Lablọ nyocha Casino
£ 80,000 na Nrite. Oké Osimiri Na-eche!
Ọnwa Ise 3, 2021 – Mee 16, 2021
Site na ụlọ nyocha a ma ama nke Casinolọ Ọrụ Casino, ndị na-eme nchọpụta ewerela onwe ha ọzọ na-achọ ebe a na-agbata n’ọsọ na ngụkọta nke ,000 80,000.
Maka mkpọsa cha cha a, Casino Lab kewara ọchị n’ime oge nkwado abụọ: Mee 3-9 na Mee 10-16.
Mee 3 rue 9: otylọ Poseidon
Banye maka egwuregwu Yggdrasil tozuru oke ma merie mmeri ọ bụla! Lablọ nyocha willlọ Ọrụ ga-akwụghachi ụgwọ onyinye 640 maka mkpọsa cha cha a nke nwere ọdọ mmiri nke £ 40,000. E kewara ọdọ mmiri a na-agbata n’ọsọ ebe onye mmeri nwere ike iburu £ 5,000!
1 x £ 5,0004 x £ 2,5005 x £ 1,00010 x £ 50020 x £ 100100 x £ 50200 x £ 25300 x £ 10
Egwuregwu ndị a gosipụtara maka nkwalite a gụnyere egwuregwu Yggdrasil ndị a:
Atlantis GigaRiseHolmes na Oké Nkume Ezumike Kalley nke Chi 2Jackpot RaidersDwarf MineRobin – Sherwood MaraudersLucky NekoVult nke Fortune
Nzọ ọ bụla na egwuregwu ndị a nwere ike inye gị naanị ihe nrite 1. A ga-enye onyinye niile na akaụntụ ndị meriri na oge nkwalite niile.
Mee 10 ruo 16: Reef nke ụgwọ ọrụ
Maka agba nke abụọ nke mkpọsa a, ndị egwuregwu ga-apụrịrị ọzọ ma kpọọ egwuregwu Yggdrasil tozuru oke. Gbalia mejuputa ebumnuche nke ebumnuche ma merie otu ihe nari iri atọ na ise na echere gi. Agba nke abụọ a nwere ọdọ mmiri ngụkọta nke ruru £ 40,000. Maka nke mbụ, onye ọkpụkpọ ahụ ga-enweta ụgwọ ọrụ 10,000.
1st = £ 10,0002nd = £ 5,0003rd = £ 2,0004th to 8th = £ 1,0009th to 20th = £ 50021st to 35th = £ 10036th to 140th = £ 50141st to 350th = £ 25
Iji merie, rịba ama ebumnuche ndị a na egwuregwu Yggdrasil ọ bụla ruru eru ma mezue ndị ọzọ:
Atlantean GigaRise = Na-anakọta akara 10 Anụ ọhịa na egwuregwu gị niileHades Gigablox = outbụ njirimara ọgụ n’oge isi egwuregwu ugboro abụọValley nke Chi dị iche iche = Mee ihe akpụrụ akpụ na wiil na thriceMultifly! = Nịm na 3, dropdown 3x n’oge isi egwuregwu
Ndị egwuregwu niile nwere ike mezue ozi maka oge mbụ ga-enweta nọmba ọkpụkpọ pụrụ iche. Ọzọkwa, a na – ahụkarị nọmba ọkpụkpọ egwuregwu pụrụ iche na onye ndu n’ime egwuregwu iji hụ ya ngwa ngwa. A na-enye ndị mmeri ihe nrite ego niile mgbe ọkwa ikpeazụ dị na bọọdụ ahụ gosipụtara.
Maka ndị egwuregwu ọhụụ: nkwụnye ego 1: 100% £ 100 + 300 extra spins 18 + Full T & C’s Apply. Ọhụrụ ndị egwuregwu UK naanị. £ 10 min. nkwụnye ego. £ 5 max. nzọ site na iji Daashi. 40 x wagering metụtara. Daashi dị irè maka ụbọchị 14. 30 Spins na egwuregwu ndị ahọpụtara ga-akwụ ụgwọ ozugbo + mgbe ahụ 30 kwa ụbọchị maka ụbọchị 9. Free Spins dị irè maka awa 72 site na kredit. Max. Free na-enweta mmeri £ 100. Skrill + Neteller ewepu. www.oyi-anya
Play’N Go’s Nnukwu oghere mechie!
Ọnwa Ise 4, 2021 – Mee 9, 2021
Nnukwu oghere ndị dị na Play’n Go emesielarị Plaza Royal Casino maka mkpọsa izu a!
Oge eruola itinye aka na oghere ndị dị egwu, yabụ were egwuregwu taa site na ịhọrọ egwuregwu Play’n Go nke ruru eru n’okpuru.
Nkwado nke DeadRise nke MerlinCoils nke CashReactoonz 2Fire Joker
Nzọ ọ bụla you 1 ị mebere na oghere Play’n Go a bụ 1 nkeji isi. Enwere ike ịhụ bọọdụ ahụ na egwuregwu niile dị n’elu iji melite ndị egwuregwu niile bụ akụkụ nke nkwalite a. Ya mere, cheta usoro 3 a iji mee ka ọtụtụ onyinye a:
Egwuregwu egwuregwu Spin Playn Go na-eru eru igwu egwu iji nweta ihe ma debe ya na ndu egwuregwu, Gbaa ndị egwuregwu ndị ọzọ aka na ndị isi ka ha nwee ohere iji merie otu akụkụ nke pool 5,000
A ga-ekwuputa ndị mmeri niile site na Mee 10, 2021. Ndị egwuregwu kachasị elu na bọọdụ ahụ na njedebe nke nkwalite ahụ ga-enweta ihe nrite ndị a dịka ọkwa ha si dị:
Ebe 1st = £ 2,0002nd ebe = £ 10003rd ebe = £ 5004th ebe = £ 2005th ebe = £ 1006th to 10th = £ 5011th to 111th = £ 5112th to 312th – = 20 Bonus Spins on Book of Dead
N’ikpeazụ, Plaza Royal cha cha achọghị ego ọ bụla na onyinye ego ndị a. Yabụ, ndị mmeri niile nwere ike iburu ihe nrita ha n’enweghị nsogbu!
Maka ndị egwuregwu ọhụụ: 100% rue £ 50 + 100 ụma na-atụgharị nkwụnye ego 2nd: 50 ruo £ 75 Ebe nkwụnye ego nke atọ: 50% ruo £ 75
Tinye ego na Trustly na Bag 100 Spins!
Ruo Mee 29, 2021
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị inweta ntụgharị ọzọ, Casiplay Casino dị njikere inye ego 100 Bonus na Fire Joker Slot. Iji nweta freebies ndị a, ihe ị ga – eme bụ itinye nkwụnye ego site na iji ntụkwasị obi ma kwuo spins gị!
Yabụ, sonyere ọtụtụ puku ndị egwuregwu na-ejikwa Trustly na Casiplay ugbu a dịka usoro ịkwụ ụgwọ ha tụkwasịrị obi. Ozugbo nkwụnye ego gị dị, a na-ekwe gị nkwa 100 Bonus Spins nke enwere ike iji naanị na oghere dị n’elu.
Naanị naanị ndị egwuregwu bi na UK, nkwalite a na-abịa na koodu ego pụrụ iche. Jiri akara a: TRUSTLY100 na ibe nkwụnye ego mgbe ị họrọ Trustly. Ozugbo i jiri ego Bonus gị niile, Casiplay Casino chọrọ ụgwọ nke bụ 35x osisi gị iji wepụ ihe mmeri gị. N’ikpeazụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla nke jiri Trustly tinye ego nke ọma nwere ike isonye na mkpọsa a.
Dịka edepụtara n’elu, e nwere ụdị mkpọsa cha cha dị iche iche ị nwere ike ịhọrọ. Yabụ, họrọ nke kachasị mma nke ga-eme ka afọ ju gị mgbe ị na-egwu egwu.
Tags:mmiri ndị nkwalite ọdọ ọzọ Pool
Eze nwamba Megaways nyochaa (RTP: 96.72%)
Egwuregwu ndị Africa na-ahụkarị bụ ihe nkịtị na ụlọ ọrụ …